Fahafaham-pon'ny karatea aorian'ny fanaovana fanamarinana CCNA | NY
Fahafaham-pon'ny karatea aorian'ny fanaovana fanamarinana CCNA
Ny mari-pankasitrahana Cisco CCNA dia ny hetsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mba hahitana asa mahomby miaraka amin'ny marika malaza indrindra amin'ny orinasa Networking. Ny Cisco Systems dia tompondakan'ny iray amin'ireo mpamokatra malaza, mpamorona ary mpivarotra Networking Routers sy Switches. Cisco dia manangana tambajotram-pifandraisana "manerantany" - tetikasam-pihetseham-po mafonja sy mahatalanjona voalohany izay mampifandray ny olona manerantany amin'ny alàlan'ny horonam-peo Audio sy Video. Ny fanamarinana CCNA dia ny hetsika mifototra amin'ny fivelomana miaraka amin'ity marika ity. Ny CCNA dia dingana iray manan-danja ao anatin'ny fotoana lavalava ary ho toy ny fiantsoana mahery vaika ny safidy ataonao ho an'ny hoavinao.
Cisco dia manolotra fiofanana sy fanamafisana CCNA izay hanampy anao handroso amin'ny asa efa nataonao. Ny fandaharan'asa fanamafisana ny Cisco dia manolotra fandaharana dimy -
Injeniera Cloud, ny lohan'ny rahona sy ny fananganana rafitra: Manolotra karazana CCNA na Cisco Certified Network Associate ny sehatry ny Associate. CCNA Cloud dia manampy ny injeniera rahona, ny rahona mpanatanteraka ary ny injeniera matihanina. Ity fandaharana ity dia fomba mahavariana hiatrehana ny fahazoana ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-manaony amin'ny fanaraha-maso ny fandrosoana eo amin'ny fiaraha-monina. Ny fandaharam-pianarana voafetra dia mampiditra ny Cisco Cloud Fundamentals sy ny Cisco Cloud Administration ary manolotra ny Cisco Cloud Administration izay azo alaina ao amin'ny tranokala elektronika Cisco.
Security Operations: CCNA Cyber ​​Ops dia fahavononana hanokatra varavarana misokatra ho anao. Ny fitazonana ny filaminana ho an'ny ordinatera dia asa miezaka izay hampiofanana anao ny fiofanana CCNA Cyber ​​Ops. Aorian'ny accreditation, afaka manomboka ny asanao ianao amin'ny fifantohana amin'ny asa fiarovana. Amin'ny alalàn'ny CCNA Data Center, ny CISCO dia manolotra drafitra midadasika izay hahafahanao mamonjy fotoana sy vola amin'ny fomba fijery, ohatra, ny mpikarakara ny sehatra, ny fampiasana sy ny fiarovana. Ho an'ireo izay tafiditra ao amin'ny distrika misy ifandraisany amin'ny IT sy ny rafitra ankehitriny, ny CCNA Industrial no fanapahan-kevitra tsara indrindra. Tena manan-danja tokoa ny fanangonana, ny fanaraha-maso ary ny orinasa sy solika.
Fiarovana: Fampiofanana CCNA hafa izay omen'ny CISCO ny CCNA Security. Ny rafitra azo ampiasaina amin'ny CCNA dia hanana fahaizana hampivelatra rafitra fandriampahalemana, mahita ny loza ary mandanjalanja ny fandaminana ny loza. Hanana fahaizana amin'ny fampandrosoana ampiasaina ho sehatry ny fiarovam-piarovana izy. Ireo manam-pahaizana amin'ny CCNA Routing, Cisco CCENT sy ny fifindrana, na ny CCIE mari-pankasitrahana dia mifanentana amin'ny volavolan-dalàna hiomanana amin'ny CCNA Security Accreditation.
Wireless: CCNA Wireless affirmation dia miresaka ny olana ateraky ny manam-pahaizana Wireless izay manome antoka fa ny fampandrosoana ampiasain'ny orinasa dia ao anatin'ny tontolo tonga lafatra, voamarina ary ambonin'izany rehetra izany dia nanatanja-tena. Ity karazana fampiofanana ity dia hampitombo ny fahalalanao sy ny fahaiza-miasa ao amin'ny LAN napetraka, ny fanamarinana sy ny fandinihana. Hanana fahaizana hamoronana tambajotram-pifandraisana manokana ianao mba handaminana sy hananana tambajotra midadasika kokoa. Ity fifanekem-pihavanana ity dia manana roa farafahakeliny.
Ny mari-pahaizana, ohatra, ny CCNA dia manome fanaovan-tsoa ho an'ny fiantsoana anao ary mahatonga anao hivoatra. Ny fanamarinana ao amin'ny CCNA dia manome fahafahana anao hivadika ho tombontsoa lehibe ho an'ny fiarahanao.
CCNA Certified Professionals - Fanontaniana Fanontaniana sy Valiny
Nahoana ny orinasa dia mila manam-pahaizana momba ny fiarovana sy ny adiresy CEH Certified?